टिभीको यस ३८ वर्षीय आमाले शेयर गरिन आफ्नो बिकिनी फोटो र लेखिन यस्तो !
चैत २७, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ । टिभी सिरियल ‘कहता है दिल’ बाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी अभिनेत्री काम्या पञ्जाबी अहिले विशेषत: आमाको भूमिकामा देखा पर्छिन । हालै उनले एक बिकिनी फोटो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा शेयर गरेकी छिन । उक्त फोटोमा उनलाई स्विमिंग पूलमा मस्ती गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ । जुन फोटोले अहिले इन्टरनेटमा हंगामा मच्चाएको छ ।
काम्याले फोटो शेयर गर्दै क्याप्सनमा ट्रोलर्सहरुलाई कडा जवाफ दिएकी छिन । उनले क्याप्सनमा लेखेकी छिन – “मेरो गल्ती, मेरो विकल्प, कुनै पश्चाताप छैन ।” आजकल सेलिब्रेटीहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा सजिलै ट्रोल हुन्छन । सोही कारण काम्याले पहिले नै उनीहरुको बोली बन्द गरिदिईन ।
काम्या करिब १६ वर्ष देखि नै छोटो पर्दामा काम गर्दै आइरहेकी छिन । यी दिनहरुमा उनी सिरियल ‘शक्ति अस्तित्व के अहसास की’ मा प्रीतोको भूमिका निभाईरहेकी छिन । यस बाहेक काम्या ‘कमेडी सर्कस’, ‘बिग-बोस-७’ र ‘बक्स क्रिकेट लिग’ जस्ता शोका हिस्सा भईसकेकी छिन ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, चैत २७, २०७४१५:००
को हुन् प्रभाससँग विवाह गर्ने भनिएको निहारिका कोनिडेला ? यस्तो छ निहारिका-प्रभास विवाहको वास्तविकता
कपिल शर्माकी अनस्क्रिन पत्नी सुमोना देखीईन् यस्तो कामुक आवतारमा ( तस्विरसहित )
सलमान खान जेलबाट रिहा भएपछि कलाकार दिपकराज गिरीले लेखे यस्तो स्टाटस
वरुणको जन्मदिनमा भयो ठुलो खुलासा, कट्रिनासँग गर्नेछन् रोमान्स!
ऐश्वर्या रायका यी १० दुर्लभ तस्बिर जुन शायद तपाईले अहिले देख्नु भएको छैन होला